Manana fanontaniana? Antsoy izahay:+ 86-13256715179
Sokafy ny tsenan'i Russia Far Atsinanana
Tamin'ny volana aogositra 2020, ny labiera mainty andiany voalohany dia natolotra soa aman-tsara tany amin'ny tsenan'i Russia Far Atsinanana. Amin'ny maha marika labiera malaza an'ny labiera JINBOSHI ity, sambany no niditra tao amin'ny tsenan'i Rosia ny labiera Black Beauty. Tato ho ato, ny fangatahana labiera avo lenta dia ri ...
Fahatongavana vaovao, Sleek 355ml Kavina aluminium
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanondrana ambony kalon'ny alimo alim-bazaha roa avy any Shina, izahay ERJIN CAN dia za-draharaha sy matihanina amin'ny fanohanana ny fonosana labiera / zava-pisotro azonao ao anaty can. Ny canina dia be mpampiasa amin'ny labiera, divay, zava-pisotro mahery, zava-pisotro misy angovo, ranom-boankazo, dite, kafe, rano mamirapiratra sns ... ary izahay ...
Fampirantiana an'i Jinan Erjin eo amin'ny tsenaben'ny Kanton-tserasera faha-127
Isan-taona, ny Canton Fair dia mitaona ny mpividy eran'izao tontolo izao hiangona any Guangzhou hividy entana, mpamatsy loharano ary hifanakalo traikefa. Fantatra amin'ny hoe "Fampirantiana laharana faha-1 an'i Shina". Noho ny fielezan'ny COVID-19 manerantany dia notontosaina ny ...
MOMBA NY MICRO MATIC
Sleek 310ml Aluminium Can, Aluminium Can 330ml Standard, Aluminium Afaka 310ml malama, Aluminium Can 355ml Standard, Aluminium Afaka 250ml malama, Sifotra 200ml vita amin'ny aliminioma,
Fampidirana fibre optic & Patch Panel Factory any Shina